Budata Game maka Windows
Ndewo Agbata Obi 2 dị na Steam! Ndewo Agbata Obi 2 Alpha 1, otu nime egwuregwu egwu egwu kacha mma na PC, dị ugbu a maka nbudata nefu. Ndewo Ndi Agbata Obi 2 Alpha 1 di maka nbudata nefu tupu Ndewo Ndi Agbata Obi 2 weputara. Ndewo Agbata Obi, otu nime egwuregwu egwu kacha egwu na PC na ekwentị mkpanaaka, bụ ihe na-aga nihu. Gbalị...
PES 2021 Lite dị maka PC! Ọ bụrụ nị na-achọ egwuregwu bọọlụ nefu, eFootball PES 2021 Lite bụ ndụmọdụ anyị. PES 2021 Lite PC pụtara maka ndị na-atụ anya egwuregwu bọọlụ PES nefu! Egwuregwu bọọlụ eFootball PES 2021 Lite, nke edebere dịka FIFA na PC, consoles na mobile, dị ugbu a maka nbudata na Steam. Iji kpọọ PES 2021 nefu, pịa na bọtịnụ...
Simulator Farming, egwuregwu kachasị mma na egwuregwu njikwa, na -apụta dị ka Farming Simulator 22 nwere eserese ọhụrụ, egwuregwu, ọdịnaya na ụdị egwuregwu. Ugbo Simulator 22, egwuregwu ugbo #1 nke GIANTS Software mepụtara, na -enye ọrụ ugbo dị iche iche na -elekwasị anya na ọrụ ugbo, anụ ụlọ na oke ohia, ugbu a nwere mgbakwunye na -atọ...
Rockstar, onye okike nke usoro GTA, wepụtara Tanya Nchekwa onwe 5, egwuregwu ikpeazụ nke usoro GTA, ma ọ bụ GTA 5 na nkenke, maka PlayStation 3 na Xbox 360 na Septemba 2013. GTA 5 Gameplay Nkọwa Rockstar kwuputara na June 2014 na ọ ga-ahapụ PC nke egwuregwu ahụ mgbe nsụgharị nsụgharị, ma kwupụta na ọ ga-ahapụ ụdị GTA 5 PC na ọdịda nke...
FIFA 22 bụ egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma na PC na consoles. Malite na slogan Kwadoro site na Football, EA Sports FIFA 22 na-eweta egwuregwu nso ka ndụ nezie na isi gameplay ndozi na a oge na-eweta innovations ọ bụla mode. FIFA 22 PC dị na Steam! Unsalable FUT dike ọkpụkpọ na-akwụ ụgwọ maka iwu maka FIFA 22 Ultimate! Budata FIFA...
Secret Neighbor bụ ọtụtụ egwuregwu nke Hello Agbata Obi, otu nime ihe kachasị egwu na egwu egwu egwu egwu na PC na mobile. Download Onye Agbata Obi Secret Neighbor bụ egwuregwu egwu egwu ọha na eze ebe ọtụtụ ndị na-eme ihe ọjọọ na-anwa ịzọpụta ndị enyi ha nokpuru ala nke onye agbata obi ha. Nanị nsogbu gị bụ na otu nime ndị omekome ahụ...
Edepụtara onye nrụpụta egwuregwu nọọrọ onwe ya Rovio, Angry Birds bụ egwuregwu na -atọ ụtọ ma dịkwa mfe igwu egwu. Ụdị egwuregwu a na -eji agagharị agagharị na -enye nde ndị ọrụ gburugburu ụwa ihe ntụrụndụ dị elu, na ụdị egwuregwu kọmputa na -enye anyị ohere ịnweta otu egwuregwu ahụ kpamkpam. Na Angry Birds, ọ na -amalite site na ezi...
Budata PUBG PUBG bụ egwuregwu royale nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na kọmputa Windows na mobile. Na PUBG, nke na - eme ka ọnụọgụ ndị egwuregwu na ekwentị na PC na - abawanye site na mmelite na - aga nihu, onye ọ bụla nwere otu ebum nuche: ịlanarị! Egwuregwu ahụ, nke dị dị ka PUBG PC (budata) na Windows na PUBG Mobile (budata) na...
Obi ụtọ Wheels, nke a makwaara dị ka Wheels Obi intọ na English, bụ nsụgharị kọmputa nke egwuregwu nkà na ụzụ a ma ama nke ukwuu na ngwaọrụ mkpanaka. Mgbe ibudata Obi ụtọ Obi ụtọ na ibe a, ị nwere ike igwu egwu ozugbo ị wụnyeghị. Anyị na-eme njem nụgbọala nwere wiil na Wheel Obi Happytọ, egwuregwu nkà nwere ike ịbụ ihe nzuzu na ihe...
Anyị egwuwo ọtụtụ egwuregwu maka akụkọ akụkọ ihe mere eme Onye nwe mgbaaka, na egwuregwu kachasị dị egwu maka imepụta aha a bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na usoro egwuregwu Middle Earth na-aga nke ọma. Ewezuga ihe ịtụnanya a, anyị zutere ọtụtụ egwuregwu dị iche iche maka ika ahụ, netiti ndị a na-agaghị echefu echefu bụ egwuregwu enwere ike...
Onye njikwa bọọlụ 2022 bụ egwuregwu nchịkwa bọọlụ Turkey nwere ike igwu na kọmpụta Windows/Mac na gam akporo/iOS ngwaọrụ mkpanaka. FM22 na -enye ụzọ ọhụụ, na -aga nihu iji chọta akụkụ mmeri gị, kụnye ụdị egwuregwu bọọlụ gị, wee merie ndị na -akwado ya. Onye njikwa bọọlụ 2022 nọ na Steam nwere mbelata 10% maka idebe ihe! Onye njikwa...
Download eji Aghọ Aghụghọ Ule Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ bụ ọkachamara eji Aghọ Aghụghọ Ule usoro mepụtara dị ka ihe mepere emepe, onye APK nwekwara ike iji ya na Windows 10 PC kachasị chọrọ. Can nwere ike ozugbo igbochi isi ike ntọala nke egwuregwu na eji Aghọ Aghụghọ Ule Engine, nke-enye gị ohere ime mgbanwe na egwuregwu ị na-agba ọsọ nokpuru...
Onye njikwa bọọlụ 2021 bụ oge ọhụụ nke onye njikwa bọọlụ, nke kacha ebudatara na egwuregwu njikwa bọọlụ na PC. Onye njikwa bọọlụ 2021 dị maka ịtụ na Steam na ụlọ ahịa egwuregwu Epic, ọ ga-adịkwa maka ịzụrụ na Nọvemba. Ọ bụrụ na ọ na-atọ gị ụtọ igwu egwuregwu njikwa bọọlụ, buru ụzọ nyefee onye njikwa bọọlụ 2021, otu nime egwuregwu...
FIFA Online 4 bụ nsụgharị pụrụ iche maka gị igwu egwuregwu bọọlụ kacha mma FIFA usoro na PC na mobile maka nefu yana English na kọmputa gị. FIFA Online 4 bụ nefu nefu igwu egwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịzụta ihe dị iche iche na egwuregwu ahụ ma jiri ha mepụta otu nke gị. Debanye aha ugbu a maka egwuregwu bọọlụ na-akwụghị ụgwọ ma...
Soccer Pro Evolution 2013, PES 2013 dị nkenke, so negwuregwu bọọlụ siri ike, otu nime egwuregwu kacha ewu ewu na -amasị ndị na -agba bọl. Usoro PES, nke a na -atụnyere FIFA oge niile, ka nọ na ndò nke onye na -ama ya aka nihi ike na enweghị ọgụgụ isi zuru oke yana enweghị ike iweta ihe ịga nke ọma. Yabụ, na ụdị 2013, PES adịla mma karịa...
Vindictus bụ egwuregwu MMORPG ebe gị na ndị egwuregwu ndị ọzọ nọ nọgbọ egwuregwu na -alụ ọgụ. Ejiri ihe akụkọ ifo chọọ ya mma, Vindictus na -enye ohere ịlụ ọgụ site na ịhapụ ndị egwuregwu nọgbọ egwuregwu na maapụ na -akwado ihe ruru mmadụ anọ. Vindictus ga -eme ndị na -achọ ahụmịhe MMORPG obi ụtọ na eserese ya na -aga nke ọma, ụwa dị...
Oku ọrụ: Vanguard bụ egwuregwu FPS (onye na-agba ụta nke mbụ) nke egwuregwu Sledgehammer meriri. Vanguard, egwuregwu nke iri na asatọ nime usoro oku nke ọrụ, ga -apụta na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S nyiwe na Nọvemba 5. Na -agba akaebe mmalite nke ndị agha pụrụ iche na akụkọ akụkọ na -adọrọ adọrọ. Bụrụ onye...
Valorant bụ egwuregwu FPS na-egwu egwuregwu efu nke Riot. Valorant egwuregwu FPS, nke na -abịa na nkwado asụsụ Turkey, na -enye egwuregwu ihe ruru 144+ FPS, mana ahaziri ya ka ọ rụọ ọrụ ngwa ngwa ọbụlagodi na kọmputa ochie. Budata Valorant Nịga nihu na egwuregwu egwuregwu, Valorant bụ onye na-agba ụta sitere na agwa 5v5. Na Valorant,...
Autobahn Police Simulator 2 bụ egwuregwu ịme anwansị nke na -enye ndị egwuregwu ohere ịrụ ọrụ dị ka onye uwe ojii wee bụrụ onye nlekọta na -adịghị agbanwe agbanwe nke iwu. Anyị nwere ike mepụta dike nke anyị mgbe anyị na -amalite Autobahn Police Simulator 2, egwuregwu ndị uwe ojii na -anabata ndị egwuregwu nokporo ụzọ awara awara...
Site na nbudata PES 2021 (eFootball PES 2021) ị nwetara ụdị PES 2020 emelitere. PES 2021 PC na -egosipụta data ọkpụkpọ ọhụrụ na ndepụta klọb. Konami na -akọwakwa PES 2021 dị ka mmelite oge eFootball PES 2021. Budata PES 2021 PC wee sonye nememe ncheta PES 25th! PES 2021 - eFootball PES 2021 Atụmatụ egwuregwu PC Mmelite oge eFootball...
Necken bụ egwuregwu emere-njem nke na-eme ka ndị egwuregwu banye nime ime ọhịa Sweden. Necken, nke ụlọ ọrụ egwuregwu akpọrọ Joccish mepụtara, nke na-etolite egwuregwu nadabereghị onwe ya ma na-enye ndị egwuregwu nefu, na-ewere ọnọdụ noké ọhịa Sweden. Egwuregwu ahụ, nke anyị na-agbaso ihe okike ime mmụọ aha ya bụ Necken, onye bi na...
Budata Fortnite ma bido igwu egwu! Egwuregwu Fortnite bụ egwuregwu egwuregwu larịị na-ekwenye ekwenye na ọnọdụ Royale. Fortnite, nke jisiri ike rute ọtụtụ nde ndị egwuregwu mgbe ha natara ọnọdụ royale agha nefu, jisiri ike ịchọta onwe ya netiti egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na 2018. Egwuregwu ahụ, nke pụtara dị ka Fortnite na PC PC na...
DayZ bụ egwuregwu igwu egwu nịntanetị na ụdị MMO, nke na-enye ndị egwuregwu ohere ịhụ ihe ga-eme mgbe zombie apocalypse wee nwee usoro nke enwere ike ịkọwa dị ka ịme anwansị nlanarị. DayZ, egwuregwu mepere emepe nke mepere emepe, na-ekwu maka ọnọdụ ụmụ mmadụ nagbanyeghị ọrịa na-apụta. Ọrịa ọjọọ a dị omimi ekpochapụla ọnụ ọgụgụ buru ibu...
Ultimate GTA 5 Superman Mod bụ ụdị ọhụrụ GTA V Superman mod. GTA 5 Superman mod, nke JulioNiB, onye nrụpụta nke kacha mma GTA 5 mod, nyere maka nbudata nefu, bụ ihe ọhụrụ kpamkpam. Ị nwere ike ibudata ụdị ike Superman kachasị ike, nke na -eme ihe ike, nke na -eme nzuzu na nke zuru oke nke emerela na kọmpụta Windows gị site na ịpị bọtịnụ...
Ndụ nihi Speed ​​bụ a ezi uche racing ịme anwansị egwuregwu na ị nwere ike igwu na gị Windows sistemụ kọmputa. Ndụ maka Speed ​​bụ otu egwuregwu kachasị ewu ewu na ndị egwuregwu niile chọrọ isonye na ịme egwuregwu ịgba ọsọ kwesịrị ịhọrọ. Ọ bụrụ nịchọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu a ebe enyemaka ndị na-akwọ ụgbọala adịghị maka ndị ọrụ nụzọ ọ bụla,...
Genshin Impact bụ Anime edinam rpg egwuregwu hụrụ nanya PC na mobile gamers. Egwuregwu egwu egwu a na-eme nefu na-ebipụta ma bipụtara site na miHoYo na-egosipụta gburugburu ụwa mara mma nke mepere emepe na sistemụ ọgụ na-arụ ọrụ nke na-eji anwansi, mgbanwe omume, na ego maka ego maka ndị egwuregwu iji nweta ihe odide ọhụrụ, ngwa ọgụ, na...
RimWorld bụ ógbè sayensị nke onye nwere ọgụgụ isi dabere na AI na-akwali. Site nike mmụọ nsọ Dwarf Fortress, Firefly na Dune. Ị na -amalite site na mmadụ atọ lanarịrị ụgbọ mmiri kpuru nime ụwa dị anya. Jikwaa ọnọdụ, mkpa, ọnya, ọrịa na ihe riri ahụ ndị na -achị obodo. Rụba noké ọhịa, ọzara, oké ọhịa, tundra na ndị ọzọ. Lelee ndị na...
Agha 2042 bụ ọtụtụ mmadụ lekwasịrị anya mbụ onye shooter (Fps) egwuregwu mepụtara dais, nke Electronic Arts bipụtara. Na Agha 2042, nke bụ usoro nke agha 4, nke pụtara na 2013, ndị egwuregwu na-ahụ onwe ha na ụwa nọgba aghara nọdịnihu dị nso. Na-eweta ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya nọgbọ agha buru ibu gburugburu ụwa na nkwado ndị egwuregwu...
Wolfteam, nke dị na ndụ anyị kemgbe 2009, na-adọta uche na atụmatụ ya pụrụ iche, nke anyị na-akpọ Fps; nke ahụ bụ, egwuregwu ebe anyị na-agbapụ, na-egwu site nanya nke agwa. Akụkụ pụtara ìhè nke Wolfteam bụ na agwa anyị na mberede na-ewere ọdịdị nke anụ ọhịa wolf na nụzọ dị otú a nwere ike ichu nta ndị iro ya na egwuregwu ahụ. Nwere ike...
Ultima Online bụ egwuregwu MMORPG nke mbụ bipụtara na 1997 wee mepee ibe ọhụrụ na ụwa egwuregwu. Ultima Online, nke kwupụtara mgbe ejikọtara anyị na ịntanetị na netwọkụ oku, ya bụ, nahịrị ekwentị, setịpụrụ ụkpụrụ tupu enwe egwuregwu MMORPG gburugburu ma metụta ọtụtụ ọgbọ. Nime afọ ndị sochirinụ, a nọgidere na -emepụta Ultima Online wee...
ELEX bụ egwuregwu RPG mepere emepe nke mepere emepe nke otu ahụ mepụtara, nke mepụtara egwuregwu egwuregwu na-aga nke ọma dịka usoro Gothic. ELEX, nke na -anabata anyị nime ụwa mara mma akpọrọ Magalan, nwere ngwakọta na -atọ ụtọ nke ukwuu. A na-ekekarị egwuregwu na-egwu egwu nime egwuregwu nke etiti mgbe anwansi na ihe okike dị ka...
Onye uwe ojii uwe ojii: Ndị ọrụ nchekwa bụ egwuregwu ebe ị sonyere ndị uwe ojii nke obodo akụkọ ifo America wee na -ahụ ndụ onye uwe ojii kwa ụbọchị. Ndị uwe ojii uwe ojii: Ndị ọrụ nchekwa bụ ndụmọdụ anyị ma ọ bụrụ na -amasị gị ihe ngosi uwe ojii, egwuregwu ịme anwansị uwe ojii. Egwuregwu ndị uwe ojii ọhụrụ na Steam! Budata ihe ngosi...
Simulator Firefighting bụ otu egwuregwu ịme anwansị kacha mma ị nwere ike igwu na PC. Ọkụ ọkụ Simulator, nke nwere ngwa Turkey, dị ugbu a maka nbudata na Steam. Ọ bụrụ na ị na -achọ egwuregwu simulator ọkụ nwere eserese dị mma ị nwere ike igwu na Windows PC, pịa bọtịnụ nbudata Firefighting Simulator dị nelu. Budata ihe ngosi ọkụ Na...
SCARLET NEXUS bụ egwuregwu na-egwu egwuregwu nke na-enye egwuregwu site na ihu igwefoto nke atọ. Na-ewere ọnọdụ nke ndị ọkachamara bụ Yuito na Kasane, onye ọ bụla nime ha nwere psychokinesis ma nwee ihe kpatara ịlụ ọgụ. Iji dozie ihe omimi niile nke ọdịnihu nke Brain Punk, jidere netiti teknụzụ na ikike uche, ị ga-emerịrị akụkọ nke abụọ....
PES 2020 (eFootball PES 2020) bụ otu egwuregwu bọọlụ kachasị mma ị nwere ike ibudata ma kpọọ na PC. PES 2020, egwuregwu bọọlụ nke Konami mepụtara site na iwere echiche nke onye ọkpọ egwuregwu ama ama Andrés Iniesta, na -abịa na ọtụtụ ndozi na ihe ọhụrụ dịka FIFA 20. Site na nkà ịgba ọgbara ọhụrụ dị ike, usoro egwuregwu ọhụrụ, physics...
The GTA San Andreas 100% Save file bụ ụdị patch ị nwere ike iji mechaa egwuregwu ahụ. Site na nbudata na GTA San Andreas 100% Zọpụta faịlụ, ị nwere ike rụchaa egwuregwu ozugbo na-ejegharị na obodo dị ka ị chọrọ. GTA San Andreas 100% Zọpụta Download Mgbe wụnye GTA San Andreas okokụre Chekwa faịlụ, ị ga-ahụ na ihe niile ọrụ na egwuregwu...
slither.io bụ egwuregwu agwọ nke nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ iji gbuo oge. Slither.io, egwuregwu ị nwere ike igwu kpam kpam nefu na ihe nchọgharị ịntanetị ọ bụla, na-ejikwa usoro nke egwuregwu Agar.io, nke ewepụtara noge gara aga wee bụrụ onye ama ama, nụzọ dị iche . Na Agar.io, anyị na-agba mbọ ịbụ bọọlụ kachasị na-eri obere ndị iro...
PC Building Simulator bụ egwuregwu ụlọ kọmputa nwere ike ịnye gị ọ funụ na ozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe echiche gbasara ịnakọta kọmputa. Na PC Building Simulator, egwuregwu mepụtara nonwe ya, PC Building Simulator, anyị na -ewu kọmputa site na ọkọ. Maka ọrụ a, anyị na -ahọrọ akụkụ nke mejupụtara kọmpụta ahụ site na ngwa ahịa ma...
Counter-Strike 1.6 bụ otu nime egwuregwu ndị ama ama nke usoro Counter-Strike, nke malitere ndụ ya dịka Half-Life mod wee gaa nihu nụzọ kwụ ọtọ. Half-Life, nke Valve wepụtara afọ ole na ole gara aga, gosipụtara ọpụrụiche nke ohere ọ nyere. Inyocha nke a, ndị egwuregwu ahụ gosipụtara ọtụtụ egwuregwu dị iche iche dabere na Ọkara...
Enwere ike ịkọwa Simulator Beast Battle dị ka egwuregwu ọgụ anụ mmiri dabere na physics. Anyị na -ahazi agha netiti dinosaurs na anụ ọhịa na Beast Battle Simulator, egwuregwu ịme anwansị nke na -enye ndị egwuregwu ohere ịlụ ọgụ nzuzu. Nọgụ ndị a ebe mgbako gbasara physics dị mma, anyị nwere ike ikpebi ọnụọgụ anụmanụ na dinosaurs anyị ga...
Rappelz bụ nhọrọ mara mma nke ukwuu maka ndị hụrụ egwuregwu nanya na-achọ ihe egwuregwu ọhụrụ na English MMORPG. Egwuregwu ahụ, ebe ị nwere ike ịhọrọ anwansi na ikike dịka usoro ọkpụkpọ gị, ga-emepe ụzọ maka ọhụụ dị iche iche dịka atụmatụ dị iche iche. Akụkọ nke Egwuregwu: Na mbido enwere naanị Creation na Mbibi na chi abụọ iji nwee ihe...
Internet Cafe Simulator bụ egwuregwu ịme anwansị ịntanetị ọhụrụ. Ị nwere ike ịtọ ma jikwaa ebe ọrụ zuru oke negwuregwu ahụ. Obodo nwere ọtụtụ ihe omume na ndị mmadụ ga -emekọrịta ihe. Ị ga -akwụ ụgwọ ụlọ na ụlọ ahịa gị. Ị ga -emerịrị ndị ahịa gị. Ị kwesịrị ị rụpụta kọmpụta egwuregwu mara mma ma dị ike. Ị nwekwara ike ịme azụmahịa...
Candy Crush Saga bụ egwuregwu kachasị atọ ụtọ 3 egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu dị ka Windows 10 tablet na kọmputa. Nwere ike igwu egwuregwu a, nke ruru ọtụtụ nde nbudata na mkpanaka na obere oge, na Windows PC gị. Candy Crush Saga, otu nime aha mbụ na-abata m nobi ma a bịa negwuregwu egwuregwu dakọtara, etufubeghị aha ya...
Ofwa nke Warcraft abụghị naanị egwuregwu, ọ bụ ụwa dị iche maka ọtụtụ ndị egwuregwu. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka egwuregwu dị egwu nịntanetị nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-egwu, ndị na-egwu egwuregwu ahụ maara na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Akụkọ banyere Warcraft, nke malitere site na ezigbo usoro na egwuregwu...
Paladins bụ egwuregwu ị kwesịrị ị na-atụ uche ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwu kpụ ọkụ nọnụ fps. Na Paladins, egwuregwu FPS dị nịntanetị ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa gị, ndị egwuregwu na-aga ebe a na-egwu egwuregwu ma tunyere ikike ebumnuche ha na ndị egwuregwu ndị ọzọ. Paladins jikọtara ụdị egwuregwu MOBA nke anyị maara...
Euro Truck Simulator 2 bụ ngwongwo ụgbọala, egwuregwu simulator nke na-adọta uche na ụzọ ya. Nwere ike igwu egwuregwu egwuregwu gwuru egwu naanị gị ma ọ bụ nịntanetị. ETS 2 bụ ihe na-aga nihu na egwuregwu egwuregwu egwuregwu nke Euro Truck Simulator. Na Euro Truck Simulator 2, eserese ndị toro eto na ụzọ ụzọ sara mbara na-eche anyị. Anyị...
Elder Scrolls Online bụ RPG ntanetị na ụdị MMORPG, nkeji nkeji kacha ọhụrụ na usoro ama ama Elder Scrolls, otu nime klaasị RPG kacha ochie na kọmputa. Dị ka a ga -echeta, Bethesda wepụtara Skyrim, egwuregwu nke ise nke usoro Elder Scrolls, na 2011 na ọ fọrọ nke nta ka ọ hichapụ ihe nrite ahụ nafọ ahụ. Mgbe emepụtara nke ọma a, Bethesda...
Chernobylite bụ egwuregwu egwuregwu egwu egwu rpg dị egwu sci-fi. Chọgharịa akụkọ na-enweghị ahịrị nọchịchọ gị ikpughere eziokwu nke oge iru uju gị na hyper-real, 3D nyocha nke ala Chernobyls Exclusion Zone. Budata Chernobylite Chernobylite bụ egwuregwu egwuregwu ndụ lanarị sci-fi sitere naka ndị mmepe nke Farm 51. Nịm na ezigbo ihe...